Global Voices teny Malagasy » Syriana mpitsoaponenana ao Torkia aho, saingy nanapakevitra ny hody an-tanindrazana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Septambra 2015 17:24 GMT 1	 · Mpanoratra John Lubbock Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Tiorkia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Vonjy Voina, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Sheriff sy ny mpanoratra John Lubbock tao Istanbul. SARIPIKA: John Lubbock
Nandany ny herintaonako latsaka tao Istanbul aho, miasa amin'ny mahampanao gazety freelance ahy sy ny fanatontosana filma . Tao aho no nihaona tamin'ny Syriana mpitsoa-ponenana maro, ka anisan'izany i Sheriff, izay nanontaniako lalana indray mandeha tao amin'ny Lalana Istikal. Lasa niara-dalana tamiko sy ny namako hiara-misotro dite izy, ary talanjona tateraka tamin'ny fanantenany sy ny idealismany aho, indrindra rehefa fantatra ny toe-draharaha sarotra iainany. Taorian'izany fihaonana voalohany izany, dia nihaona matetika izaho sy i Sheriff hifanakalo lesona teny arabo sy teny anglisy sy hiresaka politika ao Afovoany Atsinanana.
Mahazo alalana hiasa sy hianatra ao Torkia ny Syriana, na dia miovaova hevitra manoloana azy ireo aza ny governemanta satria mpikambana ao amin'ny vondrom-poko Kiorda ny maro amin'izy ireo, toa an'i Sheriff. Torkia no ahitana mponina Kiorda be indrindra eto ambonin'ny tany, ary Istanbul no tanàna be Kiorda indrindra mihoatra noho ny tanàna hafa. Mihahenjana ny toe-draharaha satria manahy ny mety hanorenan'ny Kiorda firenena mahaleotena mahazo ny faritra avaratr'i Syria sy Iraka ny Kiorda.
Ankehitriny rehefa miverina ao Londra aho, ary feno ny tantaran'ireo olona rendrika isan'andro ao amin'ny ranomasina Mediteranea ny vaovao, dia matetika aho no mieritreritra ireo mpitsoaponenana nifanena tamiko tao Istanbul. Tanora avokoa izy rehetra, manantalenta amin'ny sehatra maro ary tsy mampino ny fahasahiany. Ho an'ny olona tahaka izany, tsy manankatolotra afa-tsy fahafatesana sy fahantrana i Syria.
Nisafidy ny hitodi-doha any Syria i Sheriff satria tsy afa-manolotra filaminana ho azy isika aty Eoropa, ary maniry ny hikarakara ny fianakaviany izy. Afa-manao ny tsaratsara kokoa noho izany isika. Tokony hanome ho azy sy ny fianakaviany lalana lalana milamina mankaty Eoropa isika, fa tsy manao izay hamonoana azy hiaina loza any Syria. Manana adidy isika hanitatra ny fahalalahan-tanana nomeny antsika hoan'ireo niangaran'ny vintana. Manana adidy isika vahoaka, amin'ny mahaolombelona, hanome lalana handalovana milamina amin'ny maha-mpitsoaponenana azy ireo, ary hanampy hampitombina ny firenena niaviany, mba ahafahan'izy ireo manantena ny hody.
Mihemed Sheriff Musa ny anarako fa antsoy fotsiny hoe Sheriff aho. Teraka tao Amouda tao amin'ny faritra kiorda ao Syria tamin'ny tapatapaky ny taompolo 1980s aho. Tamin'izany fotoana izany dia maro ny tsy rariny nataon'ny fitondrana Assad, izay nandripaka ny mpikampan'ny Mpirahalahy Miozolomana tao Hama sy Aleppo.
Nisy ihany koa ny fanavakavahana natao tamin'ny vahoaka Kiorda; tsy navela hiteny amin'ny tenindrazanay akory aza izahay, maro no tsy ekena ny mahaolompirenena azy ary voarara ny antoko politika kiorda sady samborina ny mpikambana ao aminy.
Mahantra ny fianakaviako; ampijalian'ny fanintona ny raiko. Maty izy avy eo ary ny dadatoako roa no niandraikitra tamin'ny fanabeazana anay. Manana anabavy roa sy rahalahy iray aho, saingy sembana ny rahalahiko sy ny iray amin'ny anabaviko, ka tsy maintsy niasa aho hanohanako ny fianakaviako manontolo.
Niasa ho an'ny antoko kiorda voarara ny antoko Hevgirtina Gel (Firaisam-Bahoaka) ny iray amin'ny dadatoako. Tey tarigetran'ny Hevgirtina Gel ny “ny zon'ny vahoaka kiorda ao Syria hizaka tena”. Ankehitriny ny antoko dia nanatevin-daharana ireo antoko politika hafa hanangana vondron'antoko antsoina hoe PDK-S.
Antsoina hoe tanànan'ny politika sy ny kolontsaina, poezia sy ny fahadalàna i Amouda, ao avaratr'i Syria, izay nahalehibe ahy. Toy ny kambana ny politika sy ny kolontsainay, satria ny tsy rariny ara-politika hiaretanay dia noho ny mari-panondroana mahakiorda anay ara-kolontsaina.
Mpianatra taona faharoa tao amin'ny Oniversiten'i Damaskosy aho raha nanomboka ny ady an-trano Syriana tamin'ny taona 2011, nianatra fandikanteny avy amin'ny teny anglisy ho amin'ny teny arabo.
Nanatevin-daharana ny revolisiona syriana aho nandritra ny fihetsiketsehana sy ny fidinana an-dalambe tamin'ny voalohany, ka tsy afa-niverina nianatra tany amin'ny oniversite satria nokarohin'ny fitondrana. Niverina tao Amouda aho rehefa nandrava tanteraka an'i Syria iray manontolo ny ady.
Kinasako ny tsy hitsaharan'ny ankizy hahazo fanabeazana, ka dia nanomboka nampianatra maimaimpoana ny mpianatry ny lisea aho hanampy azy ireo amin'ny fiatrehana fanadinana.
Tamin'ny 2013 aho nandray anjara tamin'ny fitokonana hitokona tsy hisakafo ho fanoherana ny fisamboran'ny antoko politika kiorda ao an-toerana, ny PYD , izay mifehy ny faritr'i Rojava, ireo mpikatroka ara-politika ao an-toerana. Tamin'ny 27 Jolay 2013 ny milisin'ny PYD, antsoina hoe YPG, no nanafika ny fihetsiketseham-panoherana ampilaminana nataonay ary namono nahafaty sivily enina, naharatra olona mihoatra ny 30 ary nisambotra olona mihoatra ny 90. Niditra an-keriny in-telo tao an-tranoko ry zareo… soa ihany fa tsy tao aho. Ka izany no nandaozako azy hankao Torkia.
Sarotra ho any ny miaina ao Torkia satria lavitra ny fianakaviako aho. Tsy afa-mitondra azy ireo eto aho satria lafovidy daholo ny zavadrehetra eto. Eto Istanbul aho dia miasa mampianatra teny anglisy ao amin'ny sekoly syriana iray. Indraindray aho manome lesona teny anglisy maimaimpoana ny Syriana hahazoan-dry zareo asa tsaratsara kokoa, ary milalao saz sy baglama aho ary miaramihira amin'ny tarika misy ahy, Freedom Lovers.
Te-hiverina any Amouda aho satria amin'ny taniny no itsirian'ny zavamaniry tsirairay avy. Te-ho any Eoropa aho indray andro any saingy tsy afa-mandao irery ny fianakaviako any an-tanindrazana aho. Te-hanangana taranaka tia fanabeazana matoky ny fahafahana, fandriampahalemana, rariny ary fanajana ny hafa tsy ijerena fivavahana, firehankevitra politika na foko aho: taranaka mitsipaka fanavakavaham-poko, sy tia ny hakantony fiainana.
Te-hanokatra foibe hanaovana lesona sy fialamboly maimaimpoana ho an'ny ankizy sy ny mpianatra aho hanalavirana ny fahazazan'izy ireo amin'ny herisetra sy ny ady.
Maro dia maro ny nofinofiko sy ny zavatra tiako atao: fahafahana ho an'ny rehetra, fandriampahalemana sy rariny hoan'ny zanaka sy vahoakan'i Syria. Indray andro any aho ho afaka mianatra politika any amin'ny oniversite ao Angletera, izay fanilon'i fandriampahalemana sy ny fanantenana ho an'ny vahoaka Kiorda maro dia maro.
Maniry ny hahita an'i Kurdistan Afaka aho mialoha ny hikimpian'ny masoko. Angamba indray andro any raha afa-mahavita ny fianarako aho, dia afaka mandray anjara amin'ny fananganana fanjakana mahaleotena sy mandry fahalemana ho an'ny vahoakako.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/04/74050/